BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Giulio Terzi oo booqday Muqdisho
Giulio Terzi oo booqday Muqdisho
Ibraahim Maxamed Aadan
BBC Somali Muqdisho
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Oktoobar, 2012, 19:42 GMT 22:42 SGA
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa ku tilmaamay booqashada wasiirka arrimaha dibedda Talyaaniga, Giulio Terzi ee Muqdisho inay tahay bilowga soo nooleynta xiriirka labada dal.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamed iyo Wasiirka Dibedda Talyaaniga, Giulio Terzi
Madaxweynaha ayaa wafdiga wasiirka arrimaha dibedda ku qaabilay magaalada Muqdisho.
Kulanka kadib ayaa Madaxweynaha iyo Wasiirka arrimaha dibedda Talyaanigu ay la hadleen saxaafadda.
Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa waxa uu sheegay in uu rajeynayo in dadka Soomaaliyeed ay arki doonaan dowladda iyo dadka Talyaaniga oo nala qeybsada hawsha baaxadda leh ee dib u dhiska dalka.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Talyaaniga, Giulio Terzi ayaa isna sheegay in uu Madaxweynaha u xaqiijiyay sida dhabta ee ay dowladdiisa uga go'an tahay xiriirka iskaashi ee labad dal iyo sidii Soomaaliya ay horumar u gaari lahayd.
Wafdiga wasiirka arrimaha dibedda ee Talyaaniga, Giulio Terzi ayaa ah kii ugu sareeyay ee ka socda dowladda Talyaaniga ee booqda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho muddo labaatan sano ah.